Amboanjobe :: Talena minisitera notafihin' ny jiolahy • AoRaha
Amboanjobe Talena minisitera notafihin’ ny jiolahy
Niharan’ny fanafihanjiolahy mitam-basy ny tokantranon’ny tale iray ao amin’ny minisiteran’ny Mponina, eny Ambohitra-Amboanjobe Bongatsara, afak’omaly vao maraina be tokony ho tamin’ny 2 ora sy sasany. Naratra ilay tale sy ny zanany.
Niditra an-keriny tao an-tranon’ itsy tale itsy ireo jiolahy ampolony. Voavely tamin’ny vodibasy ny sasany tamin’ireo olona tao an-trano. Nisy koa ny naratra voatsindrona antsy, dia ny zanak’ilay tale, tovolahy 16 taona sy vehivavy iray, 52 taona.
Najifan’ireo jiolahy ny vola telo tapitrisa ariary, solosaina finday iray, finday miisa fito, firavaka volamena maro sy kiraro vitsivitsy. Ora vitsy taorian’ny fitsoahan’ireo jiolahy vao afaka nampandre mpitandro filaminana ny niharam-boina. Tonga teny an-toerana ny polisy avy eny Tanjombato sy ireo zandary avy eny Bongatsara sy Ambohimanjaka. Tsy nisy tratra ireo jiolahy.